Anyị na-ewetara gị robot dị egwu nke na-egwu bọọlụ tebụl | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-ewetara robot dị egwu nke na-egwuri egwu na tebụl
Anyị na-aga Lausanne, Switzerland, ebe École Polytechnique Fédérale mepụtara bọọlụ tebụl rọbọt. Anyị anaghị ekwu maka tebụl bọọlụ nwere ọnọdụ teknụzụ, ma ọ bụ bọọlụ tebụl na-enweghị atụ, mana bọọlụ tebụl a nwere onye iro na-abụghị onye, ​​robot nwere ikike nke ọkpụkpọ egwuregwu. Nchọpụta Spanish a bụ otu n’ime ihe ndị ụwa kacha amata mgbe Chupa Chups gachara, yabụ enweghị ike ịgbaghara aha ya nke teknụzụ, robot a na-egwu bọọlụ tebụl ga-atọ ndị hụrụ egwuregwu a ụtọ “mgbe ha enweghị onye ha ga-egwu egwu. Anyị na-agwa gị ntakịrị ntakịrị gbasara gadget a dị egwu na akụkọ ihe mere eme nke tebụl okpokoro.
Iji malite, anyị agaghị ahụ na ngwa a ụdị ezigbo osisi okpokoro, ubi nke tebụl a na-agba bọl na-emepụta ihe na-emepụta ihe, Nke a ga - enyere igwe ihe ntanetị aka na igwefoto dị elu iji jide ihe ọ bụla wee gbakọọ ihe na - esote. nke a robot pụrụ iche. Igwefoto ndị a tụrụ na pitch nwere ike iwepụta narị ihe oyiyi atọ kwa nkeji ma mara bọọlụ na ọnọdụ ndị egwuregwu niile n'otu oge. Mgbe ahụ, ọ bụ igwe eletriki ọdịnala nke ga-ahụ na ogwe ndị na-ejide ndị egwuregwu ahụ na-eme mmegharị ndị a na-emebu, ma na mmegharị ntụgharị na mkpali ma na-anakọtara ịkwaga ndị egwuregwu ahụ n'akụkụ.
O di nwute na, okpokoro okpokoro a nwere ndi nwere otu aka, ndi ezigbo ndi na-acho ocha bọọlụ n’anya, na Spain ndi n’egwuregwu bu ndi n’egosiputa ihe dika ha n’egwu, ndi n’egwuregwu nwere ukwu abuo na aru, ha na anochita anya otu. Na mpụga Spain, ọ na-ahụkarị ịchọta tebụl bọọlụ nke nwere ndị egwuregwu anaghị adị mma ma dịkwa obere pere mpe., nke na-egbochi ezigbo anwansi na pitch, ma ọ bụ ihe ọ bụ.
Dị ka ndị mmepe si kwuo, bọọlụ tebụl robot nwere ikike nke onye ọkpụkpọ nkịtị, nwere obere ahụmahụ, ọ bụ ezie na ihe bụ ihe. Ugbu a, ha na-arụ ọrụ na robot nke abụọ nke na-enye ha ohere ịsọ mpi n'etiti onwe ha, ebe ọ bụ na robot ugbu a dị nnọọ owu. Ozugbo emere robot nke abụọ, ha ga-etinye ha ka ha na-egwu egwu megide onwe ha elekere 24 kwa ụbọchịYabụ, ha ga-amalite usoro mgbazinye akpaghị aka ga-eduga ha iji meziwanye usoro ha na atụmatụ ha, iji mee ka ha bụrụ ezigbo ndị na-asọpụrụ ndị mmadụ.
Akụkọ na mkpa nke tebụl football, ihe ndị Spain mepụtara
Bọọlụ bọọlụ ka anyị si mara ya. Na Spain ọ dị ezigbo mkpa, ebe egwuregwu ya dịkwa obosara karịa mba ndị ọzọ, ịbụ onye kwesịrị ekwesị maka ndị egwuregwu anọ (2vs2). Ihe ikike izizi mbụ pụtara n’agbata 1880 na 1990 na Germany (nke bụ ezigbo ndị na-echepụta ihe), ebe ihe atụ ahụ pere mpe ma nwekwaa ụkwụ n’otu agụba, ihe dị iche na Spen. Echiche ahụ sitere na Alexandre Campos Ramírez, bụ nwatakịrị nwoke merụrụ ahụ n'oge a na-alụ Agha Obodo nke gbochiri inwe obi ụtọ na bọlbụ dịka ndị enyi ya ndị ọzọ, ya mere ọ gbalịrị ịkwụ ụgwọ maka enweghị ndị ọgba ọsọ na mgbatị anụ ahụ na egwuregwu bọọdụ. N’agbata Alexandre na Francosci Javier Altuna, onye ọkwa nkà Basque, ha chepụtara echiche a.
Agbanyeghị, mgbe a lụchara agha obodo, n'ihi ndọpụ nke ndị Spen, bọọlụ tebụl bidoro gbasaa na Europe na South America. Ewere egwuregwu ahụ dị ka ihe mba mepụtara, ọ bụ ezie na mbido ya abụghị, iwu ejiri ebe a na ụdị obosara abụọ nwere. Ndị a ga-abụ ụdị ọrụ gọọmentị nke tebụl okpokoro:
Ihe omuma nke Spanish, nke uzo di nfe na-agbadata rue etiti na umuaka doll nwere ukwu imeghe.
Ihe nlere anya nke mba ụwa, ya na ụmụ bebi plastik ma ọ bụ nke osisi ma jiri ụkwụ ha jikọta ọnụ.
E nwere ugbu a Egwuregwu Spanish Spanish nke na-ahazi asọmpi gọọmentị, ma nabata ndị hụrụ egwuregwu a n'anya nke ukwuu. Ndị China nwere Ping-Pong (ọ bụ ezie na amụrụ ya na England), anyị nwere Foosball.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Anyị na-ewetara robot dị egwu nke na-egwuri egwu na tebụl
Airlander 10 dara ụgbọ elu nke abụọ ma daa na ọdịda
Ihe onyonyo ohuru na-egosi na iPhone ọzọ ga-akpọ iPhone 6SE